Machadka Tiknolojiyadda Izmir si ay uga shaqaaleysiiso kaaliyeyaasha cilmibaarista | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaMachadka farsamada ee Izmir wuxuu shaqaaleysiin doonaa kaaliyeyaasha cilmi baarista
20 / 12 / 2019 Shaqooyinka, GUUD
Machadka teknoolojiga sare ee izmir
Go'aanka Madaxtooyada ee lambar 10.07.2018 ee ku saabsan Shaqaalaha iyo Hab-raaca guud ee lagu soo daabacay Rasmiga Gazette ee ku taariikhaysan 2, qodobbada laxiriira ee Xeer Lr 2547 iyo Rasmiga rasmiga ah ee ku taariikhaysan 09.11.2018 ayaa dhaqan galay markii lagu soo daabacay Gazette Rasmiga ah. 7 Kaaliyeyaasha cilmi-baarista (sida ku xusan qodobka 2547 / D ee 50 SK) waxaa loo shaqaaleysiin doonaa iyada oo la raacayo qodobbada ay quseyso ee Xeerka Nidaamka iyo Mabaadi'da ku Saabsan Imtixaannada Bartamaha iyo Imtixaannada Galitaanka ee lagu dabaqi doono ballamaha xubnaha kulliyada aan ka aheyn xubinta.
1- Musharaxiintu waa inay buuxiyaan dhamaan shuruudaha Qodobka 657aad ee Sharciga no.
2- Si loo dalbado shaqaalaha kaaliyaha cilmi-baarista, waxaa loo baahan yahay in uu noqdo saynis ama arday ku takhasusay cilmiga.
3- In ugu yaraan 70 dhibcood laga helo ALES duurka kaas oo ardayda lagu meeleeyo barnaamijka heerka koowaad ee barnaamijka loo qoondeeyay. Haddii codsadayaasha doonaya inay ka faa'ideystaan ​​ka-dhaafitaanka imtixaanka dhexe caddeeyaan heerka ka-reebitaankooda ee isugeynta dukumiintiyada dalabka, dhibcaha ALES waxaa loo qaddariyo inay yihiin 70 heerarka qiimaynta ka hor iyo qiimeynta kama-dambaysta ah.
4- Codsiyada kaaliyeyaasha cilmi baarista ee ardayda dhammeystiray muddadii waxbarasho ee ugu badneyd ee lagu qeexay Xeerka Qalin jebinta ee lagu daabacay Taariikhda rasmiga ah ee 06.02.2013 laakiin waqtigiisii ​​waxbarasho ee ugu badneyd dib loo bilaabay illaa Xilli-dugsiyeedka 2016-2017 oo aan la qiimeynin sida ku xusan go'aanka Golaha Sare ee Tacliinta Sare.
5-Shahaadada Imtixaanka Afka Dibadda (Imtixaanka Afka Dibadda ee Bartamaha (YDS ama YÖKDİL) ama u dhigma oo ay aqbali karaan Golaha Tacliinta Sare (YDS ama YÖKDİL) waa inay lahaadaan ugu yaraan 70 dhibcood imtixaanadii laga aqbalay ÖSYM (17.12.2019) 35/1)
6- U-sinnaanta shahaadooyinka dibloomaasiyiinta ka yimid dalal shisheeye waa in la oggolaadaa.
7- U-dhigmaanka ee nidaamyada shahaadooyinka 4 iyo 5 ee loo adeegsado xisaabinta heerka qalin-jabinta heerka koowaad ee heerka pre-qiimeynta iyo heerarka qiimeynta ugu dambeysa waxaa go'aamiya go'aanka Golaha Tacliinta Sare. Golaha guurtida ee haya'daha waxbarashada sare ayaa go'aamiya u dhigma u dhigma nidaamyada kale ee shahaadooyinka ilaa nidaamka fasalka 100.
8- Codsiyada boostada waa inay ku gaaraan machadkeena dhamaadka saacadaha shaqada. Codsiyada aan u hoggaansanayn shuruudaha kore, codsiyada aan lagu sameyn waqtiga kama dambeysta ah, codsiyada lagu sameeyo dukumiintiyada maqan, codsiyada wata dukumiintiyada aan la oggolaan in kasta oo codsiyada la oggolaaday iyo daahitaannada boostada lama aqbali doono.
9-Dukumentiyada la codsaday ee la ansaxiyay; Nuqullo nootaayo ah oo nuqul ah oo ay ansaxisay Jaamacaddu ama dukumiintiyada dalabka ayaa gacanta lagu soo dhigay, iyadoo la oggol yahay in nuqulkii asalka ahaa ee xaaladda asalka ah (sida la sameeyo) la aqbalo. Shahaadooyinka qalin-jabinta ee laga helo e-Dowladda waxaa loo isticmaali karaa codsiyada, laakiin codsadayaasha u qalma in la magacaabo waxay soo gudbin doonaan dukumiintiyada la oggolaaday.
10- Marka lagu dhawaaqo machadkayaga, musharixiinta waxay codsan karaan oo kaliya mid ka mid ah jagooyinka lagu dhawaaqay. Codsadayaasha codsada in kabadan hal shaqaale isku waqti ayaa loo qaddarin doonaa inay yihiin kuwa aan shaqeyn.
11- Baadhitaanka kuwa lagu helo inay been abuur ku sameeyeen dukumiintiyada loo baahan yahay waxaa loo qaadanayaa inay yihiin wax aan jirin oo ballantooda lama fulin doono. Xitaa haddii la magacaabay, waa la tirtiri doonaa mana sheegan karaan wax xuquuq ah.
12- Codsiyada waxaa lagu sameyn karaa qof ahaan ama boostada. our Ad http://www.iyte.edu.tr/ waxaa laga heli karaa at. Machadka wuxuu xaq u leeyahay inuu isbedel ku sameeyo kalandarka imtixaanka haddii loo baahdo. Dhammaan ogeysiisyada lagu sameeyo websaydhka machadkayada waa la ogeysiinayaa oo ogeysiis qoraal ah lama sameyn doono shaqsiyaadka. Cinwaanka Internetka ee Natiijooyinka Siidaynta: http://www.iyte.edu.tr/ d.
1- Codsi iyo Foom Codsi ( https://personel.iyte.edu.tr/veriler/ Fadlan isticmaal foomka dalabka iyo kaaliyaha cilmi-baarista ()
2- Dib u Bilow,
3- Shahaadada ALES (Shahaadada baarista ee aan ka weyneyn 5 sano)
4- Shahaadada Luqadda Dibadda
5- Shahaadada Qalinjabinta iyo Qalin jebinta (haddii la oggolaado)
6- Shahaadada rasmiga ah ee Waxbarashada Shahaadada koowaad (dukumiinti la ogolaaday)
7- Shahaadada u dhiganta shahaadada ee ardayda ka qalin jabisay Machadka Tacliinta Sare ee Dibadda (dukumenti la xaqiijiyay)
8- Dukumenti la ogolaaday oo laxiriira inuu noqdo arday (Sanad dugsiyeedka sanad dugsiyeedka 2019-2020 waa sanad dugsiyeedka ardayga waxbarashadiisa) waana in la cadeeyaa waaxda uu ardaygu wax ku baranayo waa in ay lamid noqotaa xaalada gaarka ah ee ogaysiiska.
9- Shahaadada la ansaxiyay ee Barnaamijka Qalinjabinta (Transcript waa in la helaa xilliga Semester dayrta ee sanad dugsiyeedka 2019-2020).
Gabi ahaanba waa loo baahan yahay dhammaan barnaamijyada waxbarashadda lagu sii wado oo ay ku jirto semesterka koowaad iyo simistarka hadda uma baahna in la qiimeeyo.
Haddii ay dhacdo in semesterka hada uusan ku muuqan qoraalka qoraalka, dukumiinti muujinaya tirada simistarka ardayga waxaa loo baahan yahay tixgelin iyadoo la tixgalinayo Semistarka koowaad ee barnaamijka lagu diiwaangaliyay. (Codsadeyaasha dhammaystiray muddada ugu badnaan waxbarasho illaa taariikhda isdiiwaangalinta lama aqbali doono.)
10- Koobi sawir leh,
11- Shaqaalaha hay'ad dowladeed kasta (xitaa haddii ay horay u soo shaqeeyeen) waxay soo gudbin doonaan dukumeenti dukumiinti oo faahfaahsan oo ka socda hay'adda ay u shaqeeyaan.
12-sawirro baasaboor ah (oo la qaaday 6dii bilood ee la soo dhaafay)
TAARIIKHDA CODSIGA KOWAAD: 20/12/2019
TAARIIKH CODKA: 03/01/2020
TAARIIKHDA KA HORTAGISTA: 13/01/2020
TAARIIKHDA DIIWAANKA: 24/01/2020
Shaqo qorista Shaqaalaha Machadka farsamada ee Izmir
Isbitaalka Tababarka iyo Cilmi baarista ee Antalya Nostalgia Tramway
Qorista Kaaliyaha Cilmi-baarista ee Machadka Teknolojiyadda Izmir